ချစ်ဖို့မလောနဲ့ …အချိန်ပေးပါ – Trend.com.mm
Posted on May 21, 2020 by adminK
ချစ်သူရည်းစားဖြစ်ပြီးတဲ့လူနှစ်ဦးက ကိုယ်ဟာသူ့ရင်ထဲက ချစ်သူဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကိုသိဖို့ အချိန်တအောင့်လောက် လိုအပ်တယ်။ အဲဒီအချိန်တအောင့်က နှစ်ချီကြာနိုင်သလို တချို့က တစ်သက်၊ တစ်ဘဝအချိန်ကို အသုံးပြုပြီးမှ တစ်ဘက်သားကို နားလည်ကြရပါတယ်။ ဒါကြောင့်…
ချစ်နေချိန်မှာ မျက်စိနဲ့ သေချာလေ့လာရတဲ့အပြင် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုလည်း ကိုက်ညှိကြည့်ဖို့ လိုအပ်တယ်။ ချစ်စမှာ လူတွေက မျက်ကန်းဆန်ပြီးတစ်ဘက်သားကို အကောင်းပဲမြင်တတ်ကြတယ်။ ဒါတွေက ချစ်နေချိန်မှာ လူ့ခန္ဓာကထွက်တဲ့ pheromoneကြောင့် မျက်ကန်းဆန်စေတာဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် “အချစ်မှာမျက်စိမရှိ”ဆိုတဲ့ စကားပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်။
ချစ်နေချိန်မှာ အချင်းချင်း တူညီသက်ရောက်နိုင်ဖို့ တစ်ဘက်သားကအရေးပါတယ်။
တစ်ဘက်သားရဲ့ အပြောအဆို၊ နှစ်သက်တဲ့အစားအသောက်တွေကို မသိမသာနဲ့
ကိုယ်သင်ယူမိတတ်တယ်။ နောက်ဆုံးမှာ ရုပ်ပါဖြေးဖြေးဆင်လာတာကို တွေ့ရတယ်။
ဒါကြောင့် အခုချိန်မှာ ကိုယ်ဟာ “ကိုယ်နဲ့မတူချင်တဲ့ လူတစ်ယောက်”နဲ့ချစ်သူဖြစ်နေခဲ့ရင် ခဏလောက်တော့ ကိုယ့်ကိုယ်ဆန်းစစ်ကြည့်သင့်တယ်။ သူ့ကို ကိုယ်တကယ်ချစ်သလား?
တကယ်လို့ ကိုယ်က သူနဲ့မတူချင်တဲ့ သူ့ရဲ့အလေ့အထကို သိပြီးသည့်တိုင် သူ့ကိုဆက်ချစ်နေသေးတယ်ဆိုရင် သင်ဟာ ပေးဆပ်သူတယောက်ဖြစ်နေပါပြီ။
အခက်အခဲကြုံချိန်မှ အချစ်ရဲ့ရုပ်ပုံစစ်ကို မြင်ရတယ်။
ဒါဟာ အချစ်ကိုစမ်းသပ်တဲ့ အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးဖြစ်တယ်။ မိသားစုဝင် တစ်ယောက်ယောက် ဆေးရုံတက်ရတယ် ဒါမှမဟုတ် ကုမ္ပဏီက ရုတ်တရက် အရေးအကြောင်းရှိလာတယ် ဒီလိုမတော်တဆတွေကအချစ်ကိုသက်ရောက်စေတတ်တယ်။ ဒီလိုအခက်အခဲကြုံချိန်
အမြဲတွေ့နေကြချစ်သူနှစ်ဦးက ခေတ္တခဏတော့ ခွဲကြရတယ်။ ဒီလိုအချိန်မှာ
ကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်မှုကို ချစ်သူက ဘယ်လိုအကူအညီပေးသလဲ! အကြံပေးသလဲ! ဒါတွေက
ချစ်သူနှစ်ဦးရဲ့အနာဂတ်အတွက် အဆုံးအဖြတ်ပေးတတ်တယ်။ မတော်တဆဖြစ်ချိန် ကိုယ့်ကိစ္စကို သူ့ကိစ္စလိုသဘောထားပြီးကူညီဖြေရှင်းပေးတဲ့ချစ်သူ၊ ကိုယ့်လုံခြုံမှု၊ ကိုယ့်ပျော်ရွှင်မှုကို
ရှေ့တန်းတင်တတ်တဲ့ချစ်သူမျိုးကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ ချစ်သင့်ပါတယ်။ ချစ်ရတာလည်း တန်ပါတယ်။
အခုချိန် သူ့ဆီမှာ အားနည်းချက်တွေတပုံကြီးရှိတယ်ဆိုပေမယ့် ပြောင်းလဲပြုပြင်ဖို့ သူကိုယ်တိုင်သင်ယူလိုစိတ်ရှိတယ်ဆိုရင် သူဟာ ကိုယ့်အတွက်အဖော်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ခဈြသူရညျးစားဖွဈပွီးတဲ့လူနှဈဦးက ကိုယျဟာသူ့ရငျထဲက ခဈြသူဟုတျမဟုတျဆိုတာကိုသိဖို့ အခြိနျတအောငျ့လောကျ လိုအပျတယျ။ အဲဒီအခြိနျတအောငျ့က နှဈခြီကွာနိုငျသလို တခြို့က တဈသကျ၊ တဈဘဝအခြိနျကို အသုံးပွုပွီးမှ တဈဘကျသားကို နားလညျကွရပါတယျ။ ဒါကွောငျ့…
ခဈြနခြေိနျမှာ မကျြစိနဲ့ သခြောလလေ့ာရတဲ့အပွငျ ရုပျပိုငျးဆိုငျရာကိုလညျး ကိုကျညှိကွညျ့ဖို့ လိုအပျတယျ။ ခဈြစမှာ လူတှကေ မကျြကနျးဆနျပွီးတဈဘကျသားကို အကောငျးပဲမွငျတတျကွတယျ။ ဒါတှကေ ခဈြနခြေိနျမှာ လူ့ခန်ဓာကထှကျတဲ့ pheromoneကွောငျ့ မကျြကနျးဆနျစတောဖွဈတယျ။ ဒါကွောငျ့ “အခဈြမှာမကျြစိမရှိ”ဆိုတဲ့ စကားပျေါလာခဲ့တာဖွဈတယျ။
ခဈြနခြေိနျမှာ အခငျြးခငျြး တူညီသကျရောကျနိုငျဖို့ တဈဘကျသားကအရေးပါတယျ။
တဈဘကျသားရဲ့ အပွောအဆို၊ နှဈသကျတဲ့အစားအသောကျတှကေို မသိမသာနဲ့
ကိုယျသငျယူမိတတျတယျ။ နောကျဆုံးမှာ ရုပျပါဖွေးဖွေးဆငျလာတာကို တှရေ့တယျ။
ဒါကွောငျ့ အခုခြိနျမှာ ကိုယျဟာ “ကိုယျနဲ့မတူခငျြတဲ့ လူတဈယောကျ”နဲ့ခဈြသူဖွဈနခေဲ့ရငျ ခဏလောကျတော့ ကိုယျ့ကိုယျဆနျးစဈကွညျ့သငျ့တယျ။ သူ့ကို ကိုယျတကယျခဈြသလား?
တကယျလို့ ကိုယျက သူနဲ့မတူခငျြတဲ့ သူ့ရဲ့အလအေ့ထကို သိပွီးသညျ့တိုငျ သူ့ကိုဆကျခဈြနသေေးတယျဆိုရငျ သငျဟာ ပေးဆပျသူတယောကျဖွဈနပေါပွီ။
အခကျအခဲကွုံခြိနျမှ အခဈြရဲ့ရုပျပုံစဈကို မွငျရတယျ။
ဒါဟာ အခဈြကိုစမျးသပျတဲ့ အကောငျးဆုံးအခှငျ့အရေးဖွဈတယျ။ မိသားစုဝငျ တဈယောကျယောကျ ဆေးရုံတကျရတယျ ဒါမှမဟုတျ ကုမ်ပဏီက ရုတျတရကျ အရေးအကွောငျးရှိလာတယျ ဒီလိုမတျောတဆတှကေအခဈြကိုသကျရောကျစတေတျတယျ။ ဒီလိုအခကျအခဲကွုံခြိနျ
အမွဲတှနေ့ကွေခဈြသူနှဈဦးက ခတ်ေတခဏတော့ ခှဲကွရတယျ။ ဒီလိုအခြိနျမှာ
ကိုယျ့ရဲ့လိုအပျမှုကို ခဈြသူက ဘယျလိုအကူအညီပေးသလဲ! အကွံပေးသလဲ! ဒါတှကေ
ခဈြသူနှဈဦးရဲ့အနာဂတျအတှကျ အဆုံးအဖွတျပေးတတျတယျ။ မတျောတဆဖွဈခြိနျ ကိုယျ့ကိစ်စကို သူ့ကိစ်စလိုသဘောထားပွီးကူညီဖွရှေငျးပေးတဲ့ခဈြသူ၊ ကိုယျ့လုံခွုံမှု၊ ကိုယျ့ပြျောရှငျမှုကို
ရှတေ့နျးတငျတတျတဲ့ခဈြသူမြိုးကိုယုံယုံကွညျကွညျနဲ့ ခဈြသငျ့ပါတယျ။ ခဈြရတာလညျး တနျပါတယျ။
အခုခြိနျ သူ့ဆီမှာ အားနညျးခကျြတှတေပုံကွီးရှိတယျဆိုပမေယျ့ ပွောငျးလဲပွုပွငျဖို့ သူကိုယျတိုငျသငျယူလိုစိတျရှိတယျဆိုရငျ သူဟာ ကိုယျ့အတှကျအဖျောကောငျးတဈယောကျဖွဈနိုငျပါတယျ။